Iindidi zeVisa zaseIndiya
Zeziphi iintlobo zeVisa zaseNdiya ezikhoyo
URhulumente waseIndiya uza neenguqu ezibalulekileyo kumgaqo-nkqubo wakhe weVisa ukusukela ngoSeptemba ngo-2019. Ukhetho olukhoyo kubandwendweli beIndiya iVisa luyadideka ngenxa yeendlela ezininzi ezigqagqeneyo ngenjongo enye.
Esi sihloko sigubungela iintlobo eziphambili zeVisa zaseIndiya ezifumaneka kubahambi.
I-Visa yeTyelelo laseIndiya (iIndiya eVisa)
IVisa yabakhenkethi eIndiya iyafumaneka kwezi ndwendwe zinqwenela ukutyelela i-India ixesha elingadlulanga kwiintsuku ezili-180 (ikhulu elinamashumi asibhozo eentsuku) ngexesha.
Olu hlobo lweVisa yaseIndiya luyafumaneka ngeenjongo ezinje ngenkqubo yeYoga, izifundo zexesha elifutshane ezingabandakanyi ukufumana iDiploma okanye iDegree, okanye umsebenzi wokuvolontiya ukuya kutsho kwinyanga enye. I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya ivumela ukuhlangana kwendibano kunye nokubona.
Kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo kule Visa yabakhenkethi baseIndiya efumanekayo kubakhenkethi ngokobude bexesha ngoku. Iyafumaneka ngamaxesha amathathu njenge-2020, Usuku lwe-30, unyaka omnye kunye nokusebenza kweminyaka emi-1. Kwakukho iVisa yeentsuku ezingama-5 eya eIndiya eyayifumaneka ngaphambi kowama-60, kodwa sele isusiwe emsebenzini. Ukusebenza kweVisa ye-India yeentsuku ezingama-2020 kuxhomekeke kudideko. Unokufunda malunga ukucaciswa malunga nesi sihloko silapha.
I-Visa yabakhenkethi eya eIndiya iyafumaneka zombini ngeKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya nakwi-Intanethi kule webhusayithi ebizwa ngokuba yi-eVisa India. Kuya kufuneka ufake isicelo se-eVisa India ukuba unakho ukufikelela kwikhompyuter, idebhu / ikhadi letyala okanye i-akhawunti ye-Paypal kunye nokufikelela kwi-imeyile. Yeyona ndlela inokuthenjwa, ethembekileyo, ekhuselekileyo nekhawulezayo yokufumana I-India Visa kwi-Intanethi.
Ngamafutshane, khetha xa ufaka isicelo sokuya eIndiya eVisa xa undwendwela kwiNdlu yoZakuzo okanye kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya.
Ubunyani: I-Visa yaseIndiya yoMkhenkethi ngeentsuku ezingama-30, ivunyelwe ukungena ngokuPhindiweyo (amangenelo ama-2). I-Visa yaseIndiya yonyaka o-1 kunye nonyaka wesi-5 ukulungiselela abakhenkethi yindawo yokungena emininzi yeVisa.
IVisa yoShishino lweIndiya (iIndiya eVisa)
Ishishini leVisa laseIndiya livumela undwendwe ukuba lubandakanyeke kwimisebenzi yeshishini ngexesha lotyelelo lwabo lwaseIndiya.
Le Visa ivumela umhambi ukuba azibandakanye kule misebenzi ilandelayo.
Ukuzibandakanya kuthengiso / ukuthenga okanye ukurhweba.
Ukuzimasa iintlanganiso zobugcisa / zeshishini.
Ukuseta amashishini / amashishini.
Ukuhambisa intetho / s.
Ukuthatha inxaxheba kwimiboniso okanye ishishini lezorhwebo.
Ukwenza njengoGwebi / ingcali ngokunxulumene neprojekthi eqhubekayo.
Le Visa ikwafumaneka kwi-intanethi kwi-eVisa India ngokusebenzisa le webhusayithi. Abasebenzisi bayakhuthazeka ukuba bafake izicelo kwi-Intanethi kule Visa yase-Indiya ekwi-Intanethi kunokundwendwela kwiNdlu yoZakuzo yaseIndiya okanye kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya ukulungiselela, ukhuseleko kunye nokhuseleko.
Ukungqinisisa: I-Visa yaseIndiya yeShishini isebenza unyaka om-1 kwaye ivumelekile amangeniso amaninzi.
I-Visa yeNdiya yoNyango (i-India eVisa)
Le Visa eya eIndiya ivumela umhambi ukuba azibandakanye nezonyango. Kukho i-visa eyongezelelweyo enxulumene nale ekuthiwa yi-Medical Attendant Visa ye-India. Zombini ezi Visa zaseIndiya ziyafumaneka kwi-intanethi njenge-eVisa India ngokusebenzisa le webhusayithi.
Ukungqinisisa: I-Visa yaseIndiya ngezoNyango isebenza ngeentsuku ezingama-60 kwaye ivunyelwe ukungena kathathu (amangenelo ama-3).
Bonke abo besiya eIndiya ene-eVisa India kufuneka bangene kweli lizwe ngamazibuko amiselweyo amiselweyo okungena. Basenokuthi, nangona kunjalo, baphume nakweyiphi na iMigangatho yokuGqibela yokuKhangelwa kwabaFuduki egunyazisiweyo e-India.
Okanye ezi zikhethu zichongiweyo:
I-eVisa yaseIndiya isemthethweni yokungena isuka kwiiseti zezikhululo zeenqwelo moya kunye namazibuko aselwandle. Jonga uluhlu lwakutshanje.
I-India Visa yokufika
I-India Visa ekuFikeni ivumela amalungu amazwe okubuyisanayo ukuba eze eIndiya kabini ngonyaka. Kuya kufuneka ukuba ujonge kuRhulumente waseIndiya ukuba ayililungu le-Visa yokufika.
Kukho umda we-Visa waseNdiya ngokufika, kuba kunqunyelwe ixesha leentsuku ezingama-60 kuphela. Ikwanqunyelwe kwizikhululo zeenqwelo moya ezithile njengeNew Delhi, iMumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad kunye neBengaluru. Abemi bamazwe angaphandle bayakhuthazwa ukuba bafake izicelo ze I-eVisa India endaweni yokutshintsha iimfuno ze-India Visa yokufika.
Iingxaki ezaziwayo ngeVisa yokuFika zezi:
Amazwe amabini kuphela kwangowama-2020 avunyelwe ukuba afumane i-Visa yase-India ekufikeni, kuya kufuneka ujonge ngexesha lokufaka isicelo ukuba ilizwe lakho likuluhlu na.
Kuya kufuneka ukhangele izikhokelo zamva nje kunye neemfuno zeIndiya yeVisa yokufika.
I-onus yophando ikubahambi kuba iyi-arcane kwaye ayaziwa kakhulu uhlobo lweVisa yaseIndiya
Umhambi uya kunyanzeliswa ukuba aphathe imali yaseIndiya kwaye ahlawule ngemali emdeni, ayenze ingonakali ngakumbi.
India rhoqo / iphepha leVisa
Le Visa yeyabantu basePakistan, kwaye abo baneemfuno ezinzima okanye bahlala ngaphezulu kweentsuku ezili-180 eIndiya. Le eVisa yaseIndiya ifuna ukutyelelwa okubonakalayo kwiNdlu yoZakuzo yaseIndiya / kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya kwaye yinkqubo ende yokuzoba. Inkqubo ibandakanya ukhuphelo lwesicelo, ukushicilela ephepheni, ukugcwalisa, ukwenza idinga kwindlu yozakuzo, ukwenza iprofayle, ukutyelelwa kwindlu yozakuzo, ukubhala ngomnwe, ukuba nodliwanondlebe, ukubonelela ipasipoti yakho kunye nokuyifumana kwakhona ngekhuriya.
Uluhlu lwamaxwebhu likhulu kakhulu ngokweemfuno zokuvunywa. Ngokungafaniyo I-Visa yaseIndiya kwi-Intanethi (eVisa India), inkqubo ayinakugqitywa kwi-Intanethi kwaye i-Visa yaseIndiya ayiyi kwamkelwa nge-imeyile.
Ezinye iintlobo zeVisa zaseIndiya
Ukuba uza kwiDiplomatic Mission kwi-UN mission okanye IPasipoti yozakuzo emva koko kufuneka ufake isicelo seVisa yoZakuzo.
Abenzi bemiboniso bhanyabhanya kunye neeNtatheli ezizayo zisebenzela e-India kufuneka zenze isicelo kwi-Visa yaseIndiya ukulungiselela ubuchwephesha bazo, iFilimu Visa ukuya eIndiya kunye nentatheli iVisa eya eIndiya.
Ukuba ufuna ingqesho yethutyana eIndiya, kuya kufuneka ke ufake isicelo seVisa yokuqeshwa eIndiya.
I-Visa yaseIndiya ikwanikezelwa ngomsebenzi wobuMishinari, imisebenzi yeentaba kunye neeVisa zabafundi eziza kufundela ixesha elide.
Kukwakhona neVisa yoPhando yaseIndiya enikwa oonjingalwazi kunye nabaphengululi abajonge ukuqhuba umsebenzi onxulumene noko.
Ezi ntlobo zeeVisa zaseNdiya ngaphandle kwe-eVisa India zifuna ukuvunywa zii-Ofisi ezahlukeneyo, iSebe lezeMfundo, ubuNini beZabasebenzi ngokuxhomekeka kuhlobo lwe-Visa yaseIndiya kwaye kungathatha ukuya kwiinyanga ezintathu ukunikezelwa.
Loluphi udidi lweVisa ekufuneka ulufumene / ngaba kufuneka ufake isicelo?
Kuzo zonke iintlobo zeeVisa zaseIndiya, i-eVisa ilula ukuyifumana kwikhaya lakho / eofisini ngaphandle kotyelelo lobuqu kwiNdlu yaseIndiya. Ke, ukuba ucwangcisa uhambo lokuhlala nje okwethutyana okanye ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-180, ke i-eVisa yaseIndiya lelona lilungele kwaye likhethwe zizo zonke iintlobo zokufumana. Urhulumente waseNdiya ukhuthaza ukusetyenziswa kwe-eVisa yaseIndiya.
Ukufumana ezinye iimpendulo kunye nolwazi cofa Imibuzo ebuzwa qho.